गगन भर्सेस विश्वप्रकाश, कसले मार्ला बाजी ? Canada Nepal
गगन भर्सेस विश्वप्रकाश, कसले मार्ला बाजी ?
क्यानाडा नेपाल भाद्र २० २०७८
काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको पछिल्लो समय निकै चर्चा चलिरहेको छ । महाधिवेशनको चर्चासँगै अहिले सभापति र महामन्त्रीमा को को उठ्छन् भन्ने चासो पनि बढीरहेको छ ।
यस्तै यस पटक महामन्त्री पदमा दुई नेताहरुको भीडन्त हुने भएको छ । केही दिनअघि एक कार्यक्रमकाबीच नेता गगन थापाले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए । यसअघिको महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीमा नै उठिसकेका नेता थापासँग यस पटक भने विश्वप्रकाश शर्मा भीड्ने भएका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका थापा यस पटकपनि जित्ने दाउनमा दारो रुपमा उभिएका छन् । शर्मा शेरबहादुर देउवा पक्षबाट महामन्त्रीमा उठ्ने भएका हुन् । उनले बिपीको जन्मजयन्तीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यस्तै महामन्त्री पदमा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल पनि आउने चर्चा छ । यस पदमा बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक लगायतका नेताहरु पनि आकांक्षी हुन्।
यस्तै सभापतिमा हालसम्म उपसभापति विमलेन्द्र निधि र कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले उमेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । कांग्रेसका अन्य नेताहरु पनि सभापतिमा उठ्ने तयारी गरिरहेका छन् । बरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि सभापति पदका आकांक्षी हुन्।
यस्तै सभापति पदलमा संस्थापन पक्षबाट फेरि देउवा पनि उठ्ने तयारी गरिरहेका छन् । महाधिवेशन अन्तर्गतको गाउँ तथा नगर वडा अधिवेशन शुक्रबारदेखि शुरु भइसकेको छ । हालसम्म नगर वडा अधिवेशन ३८ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन भने आगामी मंसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।
भाद्र २०, २०७८ आइतवार २१:१८:४९ बजे : प्रकाशित
# १४औँ महाधिवेशन
'केन्द्रीय सदस्य नभएपनि केपी ओलीको साथ छोड्दिन'
काठमाडौं । नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएसंगे १० औं महाधिवेशन आज सकिएको छ । चितवनमा आयोजित महाधिवेशनमा चर्चाको पात्र बनेका थिए व्यवसायी तथा नेता दुर्गा प्रसाईं ।
टिकटकदेखि सामाजिक संजालमा सबै भन्दा बढी पोष्ट दुर्गा प्रसाईंसंगै कै देखियो । महाधिवेशनमा नेताहरुसंग भन्दा बढी युवाहरु दुर्गा प्रसाईंसंग सेल्फी र टिकटक खिच्न झुमिएका थिए । युवापुस्ता माझ दुर्गा प्रसाईंको काम र बोलीले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर एमाले पार्टीभित्र अझै उनको प्रभाव बलियो हुन सकेन जसको कारण उनले यो पल्ट केन्द्रीय सदस्य पाएनन् ।
महाधिवेशन स्थल तर्फ पुगेपछि दुर्गा प्रसाईंले केन्द्रीय सदस्यमा उमेद्वारी दिएर नै लड्छु र जित्छु भन्ने सोचेर मिडियासंग उमेद्वारी दिने घोषणासम्म गरेका थिए । उमेद्वारी बारे उनले एमालेका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल समेत गरेका थिए । तर बन्द सत्रमा जब पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिइयो, दुर्गा प्रसाईंको निर्वाचनमा लड्ने योजनामा ब्रेक लाग्यो । अनि आफ्नो हजुरबुवा तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भरमा बसे ।
आफ्नो हजुरबुवा नै पर्ने भएपनि दुर्गा प्रसाईंले केपी ओलीलाई न भेट गरे न नै फोन गरेर मलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भने । दुर्गा प्रसाईं भन्छन, "म चितवनमा हुँदा मलाई भेट्ने सबैले तपाई त केन्द्रीय सदस्य पक्का भन्नुहुन्थ्यो । म व्यापारी भएको कारण र केपी ओलीको नाती भएको कारण फोन गरेर वा भेटेर आफूलाई बनाउन आग्रह गरिसक्नु भयो होला अनि हजुरबुवाले त्यत्ति त गरिहाल्नु हुन्छ नि । तर मैले बन्द सत्र पश्चात हजुरबुवासंग एकचोटी बाटोमा स्वागत गर्न मात्र देखादेख भएको थियो । त्यो बेला त न मैले केही बोल्न पाएँ न आग्रह गर्न । अनि मैले एकचोटी फोन पनि गरिन किनकी म निर्वाचनबाट लडेर जित्न त तयार भएको मान्छे किन आग्रह गर्नु भनेर चूप बसें ।"
आफ्नो हजुरबुवा अध्यक्ष हुँदा र वहाँ कै हातमा आफ्नो केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै अहिले भन्नुपर्ने रहेछ भनेर पछुतो लागेको छैन भनेर प्रश्न गर्दा दुर्गा प्रसाईंले भने, "हेर्नुस म व्यवसायी मान्छे हुँ तर राजनीतिमा आकर्षण हुनु भनेको देश विकास गर्ने ठाउँ यहि हो त्यसैले विकास प्रेमी मान्छेलाई राजनीतिले तानेको हो । केन्द्रीय सदस्य नहुँदा दुख लाग्यो तर पछुतो भने लागेन । मलाई थाहा थियो हजुर बुवाको अगाडि रोई कराई गरेको भए पाउथे होला तर अहिले मैले जबरजस्ती गर्दा भोली मैले हजुरबुवालाई गल्ती गर्दा प्रश्न उठाउन पाउदिन नि । सायद मैले पार्टीलाई अझै योगदान गर्नु भनेर अध्यक्षले चयन गर्नुभएन । म अझै सशक्त रुपमा पार्टीको लागि काम गर्छु र अर्को पल्ट केन्द्रीय सदस्य बन्छु ।"
केपी ओलीको नाती बनेर भन्दा पनि लायक पार्टीको नेता बनेर केन्द्रीय सदस्य पाउँछु भनेर आफूलाई कुनै पछुतो नभएको नेता प्रसाईंले खुलाएका छन् । अब केपी ओली फेरि अध्यक्ष बन्नु भएकोमा खुशी हुँदै भने, "हजुरबुवा फेरि अध्यक्ष हुनुभयो अब वहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म देश दौडाहा गर्छु । अब पार्टीको लागि म योगदान गर्छु । युवाहरुले दिएको मायालाई कदर गर्दै म देश विकास तर्फ आफ्नो पाईला चाल्छु ।"
मंसिर १४, २०७८ मंगलवार १७:२१:०६ बजे : प्रकाशित
सुनसरी - नेपाली कांग्रेस सुनसरी उपसभापतिका उमेदवार गफार अन्सारी मिँया र सचिवका उमेदवार रञ्जेश भट्टराईले पुनः मतगणनाकाे माग गर्दै निर्वाचन कार्यालय इनरुवामा निवेदन दिएका छन् ।
जिल्ला उपसभापतिका उम्मेदवार अन्सारी र सचिवका उमेदवार भट्टराईले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।
संस्थापन पक्षबाट उमेदवार रहेका अन्सारीले १ हजार २९७ मत प्राप्त गरेका थिए भने विजयी हुने संस्थापन इतर प्यानलका पङ्कज कुमार महतोले १ हजार ३१३ मत प्राप्त गरेका थिए । १६ मतान्तरले पराजित बनेका अन्सारीले धाँधली रूपमा मतगणना भएको भन्दै पुन गणना गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
सचिवमा एक मतले पराजित भट्टराईले आफ्नो पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि लापरबाही तरिकाले मतगणना गरिएको भन्दै निवेदन दिएको बताए । सचिवमा संस्थापन इतर प्यानलका माधवबहादुर घिसिङले १ हजार २२९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । संस्थापन प्यानलका सचिव पदका उम्मेदवार भट्टराईले १ हजार २२८ मत ल्याएर पराजित भएका थिए ।
निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन परेपछि जिल्ला निर्वाचन समितिले मतगणना स्थगित गरेको छ । सहायक जिल्ला निर्वाचन अधिकृत वेनु सिग्देलले सहमति नहुन्जेल मतगणना स्थगित गरिएको जानकारी दिए । उनले दुई समूहका उमेदवार, जिल्ला नेताको सर्वपक्षीय छलफलबाट निष्कर्ष निकालिने बताए ।प्रकाश तिम्सिना
मंसिर १५, २०७८ बुधवार ०७:३९:०१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा) को एकता महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राजासहित हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा बोक्दै आएकोराप्रपाको महाधिवेशन १७ मंसिरसम्म सञ्चालन हुनेछ । भृकुटीमण्डपमा सुरू हुने महाधिवेशनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।
महाधिवेशनमा झण्डै ४ हजार ४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशन प्रचारप्रसार समितिका संयोजक मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार महाधिवेशनले १४७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
आगामी अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र महामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन भिड्दैछन् । प्रकाशचन्द्र लोहनीले लिङ्देनलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने पशुपति शमसेर राणाले निर्वाचनमा नलड्ने बताइसकेका छन् ।
मंसिर १५, २०७८ बुधवार ०७:४८:२७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतमा आज बुधबारबाट गोला प्रणालीमार्फत इजलास र पेसी तोकिँदैछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशले इजलास र पेसी तोक्दै आएका थिए ।
तर, पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ अनुसार नयाँ अभ्यास हुन लागेको हो । अब न्यायाधीशले अपारदर्शी थैलीमा राखिएका समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी तान्नुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठताका आधारमा न्याायधीशहरूले यो थैलीबाट पालैपालो गोटी निकालेर बृहत् पूर्ण र पूर्ण इजलासहरू गठन गर्छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पेसी र इजलास अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले नै विरोध गरेपछि नयाँ अभ्यास थालिएको हो ।
योसँगै ८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीश ३७ दिनपछि गोला प्रक्रियाको सुनिश्चितता पश्चात् इजलास फर्किंदै छन् ।
मंसिर १५, २०७८ बुधवार ०८:०१:०५ बजे : प्रकाशित